2009-08-23 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Blog ​ကို Back up ​လုပ်​ကြ​စို့
​နေ​နိူင်: blog ​အ​တွက် backup ​ဘယ်​လို​လုပ်​တယ်​ဆို​တာ​လေး ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​အုံး။
​လုပ်​နည်း​က ​လွယ်​ပါ​တယ် .
(၁) blogger.com ​ကို log in ​ဝင်​လိုက်​ပါ .
(၂) setting >> Basic ​ကို ​သွား​ပြီး ​ပုံ(၁)​မှာ​လို Export blog ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၃) ​ပြီး​ရင် ​ပေါ်​လာ​တဲ့ box ​ထဲ​က Download blog ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
(၄) Save ​လိုက်​ပါ . (​တစ်​ခါ​တစ်​ရံ Downloader ​တွေ​နဲ့ Download ​လုပ်​ရင် .xml ​ဖိုင်​ကို ​မ​ရ​တာ​မျိုး​ကြုံ​ရ​တတ်​ပါ​တယ် . ​အဲ့​တော့ ​သ​မ​ရိုး​ကျ​အ​တိုင်း​ပဲ save ​လိုက်​ပါ )
(၅) ​အဲ့​မယ် .xml ​ဆို​ပြီး​တော့ ​ဖိုင်​တစ်​ဖိုင်​ရ​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
(၆) ​အဲ့​ဒီ့​ရ​လာ​တဲ့ ​ဖိုင်​ကို ​ကို Import ​လုပ်​ချင်​တဲ့ ​ဘ​လောဂ်​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ .
(၇) setting >> basic ​ကို​သွား​ပြီး Import Blog ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ .
(၈) ​အ​ခု​န​က ​ရ​လာ​တဲ့ .xml ​ဖိုင်​ကို ​ရွေး​ပါ။ automatic public blog ​ကို ​အ​မှန်​ခြစ်​ပေး​ပါ။ ​သူ​ပေး​ထား​တဲ့ code ​ကို ​ရိုက်​ထည့်​ပြီး Import Blog ​ကို ​နှိပ်​လိုက်​ပါ .
​ကဲ ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ ..
​အောက်​မှာ ​ပုံ​နှင့်​ရှင်း​ပြ​ထား​ပါ​တယ် .
​နေ​နိူင်: ​အ​ကို​ရေ....windows myanmar translator ​လေး​ရှိ​ရင် ​တင်​ပေး​ပါ​လား???
Window myanmar translator ​အ​တွက် ​လို​ချင်​ရင်​တော့ http://www.myanmarnlp.org.mm/ ​ကို​သွား​လိုက်​ပါ . ​သူ​မှာ ​တစ်​ခါ​တည်း Download ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ခ​မဲ့ Download ​လုပ်​လို့​ရ​ပါ​တယ် .
thu: dear bro! how can i get the window XP (home edition)..could u suggest me where can i get this? thx!
Download Windows XP Media Center Edition From Rapidshare
Download Windows XP Media Center Edition From Megaupload
Download Microsoft Windows7Megaupload
window ​ကို Geniue ​ဖြစ်​အောင်​ဘယ်​လို​လုပ်​မ​လဲ
​ဒါ​က​တော့ ​ညီ​လေး​တစ်​ယောက်​မေး​ထား​လို့​ပါ .. ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​အောက်​က​ပေး​ထား​တဲ့​ဖိုင်​ကို download ​လုပ်​လိုက်​ပြီး . ​ဖိုင်​ကို ​ဖြေ​ထား​ပေး​ပါ .
​အောက်​က​ပုံ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​ဖိုင် ၃ ​ဖိုင်​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ .
​အို​ကေ​တယ်​ဆို​ရင် ​အောက်​က ​အ​ဆင့်​အ​တိုင်း​ဆက်​လုပ်​လိုက်​ပါ .
- Start >>> Run ​ကို​ဖွင့်​ပါ။ (Windows Key + R)
- regedit ​လို့​ရိုက်​ပြီး OK ​ကို​နှိပ်​ပါ .
- ​ပေါ်​လာ​တဲ့ Registry Editor ​ဝင်း​ဒိုး​မှာ File -> Import... ​ကို​ရွေး​လိုက်​ပါ .
- Import Registry File ​က​နေ ​အ​ပေါ်​က download ​လုပ်​ပြီး ​ဖြေ​ထား​တဲ့ Make Genuine ​ဆို​တာ​ကို​ရွေး​ပြီး ok ​ပေး​လိုက်​ပါ .
- ​လုပ်​ဆောင်​ချက်​အောင်​မြင်​ကြောင်း box ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .
- ​အ​ခု​လုပ်​လိုက်​တာ ​အောင်​မြင်​လား ​မ​အောင်​မြင်​လား​ဆို​တာ​ကို Download ​လုပ်​ထား​တုန်း​က ​ပါ​လာ​တဲ့ Microsoft Genuie Advantage ​ဆို​တဲ့ Tool ​နဲ့ ​စမ်း​ကြည့်​လိုက်​လို့​ရ​ပါ​တယ် .
- ​လုပ်​ဆောင်​ချက်​အောင်​မြင်​ရင် ​အ​စိမ်း​ရောင်​စာ​သား​ကို ​မြင်​ရ​ပါ​မယ် . ​မ​အောင်​မြင်​ရင်​တော့ ​အ​နီ​ရောင်​စာ​သား​ကို​ပဲ​မြင်​ရ​မှာ​ပါ .